Goobaha Khadka Tooska ah ee Noorwiijiga - Xeerarka gunnada ee Khadka Tooska ah ee Khadka
Loading ...Khamaarka had iyo jeer laguma raaxeysto caannimo ballaaran Norway. 40-yadii iyo 50-yadii, xitaa ciyaaro kaararka fudud bulshada ma aysan ansixin. Hadda Norwey waxay leedahay laba shirkadood oo dowladu leedahay, oo xaq u leh inay siiyaan norwiiji khamaar leh. Norsk Tipping waxay maamushaa bakhtiyaa-nasiibka, sharadka isboortiga iyo ciyaaraha degdegga ah, iyo Norsk Rikstoto wuxuu xakameynayaa sharadka tartanka fardaha. Afyareyaashu aad ayey caan u yihiin waddanka, laakiin waxaa la mamnuucay 2007, ka dibna dib ayaa loogu soo bandhigaa qaab is-dhexgal fiidiyowyo is-dhexgal ah oo u baahan kaarar gaar ah. Kaararkaani waxay kuxiran yihiin xisaabaadka bangiga ee ciyaartoyda waxayna kuxiran yihiin xadeyn adag.
Khamaarka khadka tooska ah waa ka sharci gudaha Norway, laakiin xaalada halkaan ka jirta waa mid cakiran. Norsk Tipping, oo ah shirkada dawladu maamusho bakhtiyaa-nasiibka iyo khamaarka isboorti ee Norwey, ayaa khadka tooska ah ka gashay 2002. Waqtigan xaadirka ah waa barta kaliya ee ay ciyaartooyda reer Norway sharci ku dhigi karaan sharad ciyaaraha, laga bilaabo Diisambar 2008 si ay u adeegsadaan adeegyada bogagga shisheeyaha ee khamaarka Noorway waa sharci daro.
Mamnuucida waxaa ka mid ah wareegyo la mid ah sharciyada qamaarka ee Mareykanka - Norges Bank looma ogola inay lacag ka soo wareejiso akoonada Norway una dirto akoonada shirkadaha ka shaqeeya khamaarka ajaanibta. Si kastaba ha noqotee, dowladdu waxay qorsheyneysaa inay dhameystirto xannibaadda bixiyeyaasha ajaanibta ah weli lama hirgelin, hawlwadeenada ajaanibta ahna waxaa heli kara ciyaartoy maxalli ah
Eeg liiska boggaga internetka ee casino ee aqbala ciyaartoy ka socota Norway, oo bixiya ciyaaro tayo sare leh oo ammaan ah. Halkan waxaad ka heli doontaa madadaalo ballaadhan oo ka bilaabanta mashiinnada ciyaarta ilaa ciyaaraha khamaarka oo ka nool kuwa iibiya barnaamijyada caanka ah sida NetEnt, Merkur, IGT, Novoline, Microgaming, Betsoft, Rival Gaming, iyo kuwo kale oo badan.
Maanta waxaan sii wadaynaa safarkayagii annagoo ku sii marayna waddamada Scandinavia waddadeenuna waxay ku taal waddanka quruxda badan ee fjords, biyo-dhacayaasha quruxda badan, barafka iyo cirifyada - Norway. Waddankan cajiibka ah ee cimilada adagi kama tagayso danayn la’aan. Waxaan dhex lugeyneynaa waddooyinka Oslo, sidoo kale waxaan ogaaneynaa sida ay wax u socdaan khamaarka. Maxay yihiin sirta iyo astaamaha gaarka ah ee dalkan ku hayaa?
Norway - wax yar oo ku saabsan waddanka iyo taariikhdiisa;
Bakhtiyaa-nasiibka la oggolaaday, sharadka dhacdooyinka isboorti, kaararka xoqidda, keno, khamaarka tan iyo 2015.
Noorway waa boqortooyada Waqooyiga Yurub, oo ku taal qaybta galbeed ee Jasiiradda Scandinavia. Waddanku sidoo kale waxaa ku jira firidhsan dhammaan jasiirado yaryar.
Waxay u badan tahay, magaca dalka inuu ka yimid ereyga Old Norse ” Norigrvegr ", Oo macnaheedu yahay" jidka woqooyi. Waana in la ogaadaa, waa cimilo aad u qallafsan oo waddanka ku reebtay raadkeeda taariikhdeeda. Ka dib xilligii barafka ee hadda loo yaqaanno Noorway waxay ahayd cimilo aad u wanaagsan, sidaa darteed waxay ahayd meel dadku ku badan yahay.
Laakiin markii ay kordheen cufnaanta carrada ee dadku way yaraadeen, oo ragga badhkood ee dadku waxay u oomanaayeen magac iyo maal. Sidaa darteed, si dhakhso leh xilligii Viking qabsashada, dhulka ay dakhligu ku xiran yahay Turkiga laftiisa.
Qarnigii 18-19 qarnigii la soo dhaafay Norway waxay hoos timaadaa saameynta ay ku leeyihiin wadamada deriska ah ee Danmark iyo Sweden waxayna ku dhowdahay inay lumiso maqaamka dowlad madaxbanaan. Laakiin sanadkii 1905 natiijooyinkii codbixintii shacabka ayaa midowgii iyo Iswiidhan la baabi'iyay oo waddanku qaatay gobanimo. Hada boqortooyada dastuuriga ah ee Norwey, boqorka magaciisu waa Harold V.
Bal aan dhahno hal mar, khamaarka dalkan waa mid aad u adag. Marka la barbardhigo wadamada deriska la ah Sweden iyo Finland ayaa ah sharciyada ugu daran ee ku saabsan khamaarka. Dalka gudihiisa waxaa ka jira oo kaliya 2 shirkadood («Norsk Tipping» iyo «Norsk Rikstoto»), kuwaas oo loo oggol yahay inay khamaar sameeyaan. Asal ahaan waa bakhtiyaanasiib, lagu sharaddeeyo dhacdooyinka cayaaraha iyo keno. Waxay ku xiran yihiin Wasaaradda Dhaqanka, oo iyaduna dejisa xeerarkeeda. Kuwaas waxaa ka mid ah xadka da'da ee 18 sano.
Mashiinada ciyaaraha ee Norwey waxay lahaayeen ubax deg deg ah 2001-2004, laakiin 2007 waxay dawladdu soo bandhigtay xakameyn adag oo ku saabsan cabirkooda waxayna si weyn u dhimeysay tiradooda. Khamaarka khadka tooska ah ee wadanka looma helin nasiib wacan: laga soo bilaabo Juunyo 2010, dhamaan goobihii waaweynaa ee dibada waxaa laga mamnuucay Norway, bangiyadiina waxay xayirayaan dhamaan kaararka debit iyo kaarka amaahda ee casinos-ka internetka ee aduunka oo dhan.
Dabcan, haddii aad rabto inaad ku diyaarsato partiyu-poker kale guriga, markaa adiguba waxay noqon doontaa waxba. Laakiin hadday ahaan lahayd mid nidaamsan oo hay'adaha sharci fulinta loo qoondeeyo xaaladdaada ganacsi ee mashquulka ah - mas'uuliyadda dembi ee lagaa qaado kama baxsan doonto. Sababtoo ah dabeecadda adag ee khamaarka ee wararka ayaa si isdaba joog ah u soo bandhigeysa warbixinnada ku saabsan weerarada lagu qaado casinos-ka sharci darrada ah iyo naadiyada turubka, taageerayaasha xiisaha lehna waa inay ku ciyaaraan madadaalo ka baxsan dalka.
Matxafka Markabka Viking. Cinwaanka: Huk Aveny 35. Tan iyo markii 1931, maraakiibtani waxay rabaan indhaha iyo baaritaannada masistov.Ekspozitsiya waa xajmiga 3, oo lagu dhisay qarnigii XYX, waxana uu ku tiirsan yahay xeebaha ka badan sanadaha 9.
Matxafka Munch. Cinwaanka: Toyengata, 53. Madxafkan ayaa soo aruuriyay ilaa 28,000 oo sawir gacmeedyo, boorar, sawir gacmeedyo iyo farshaxanno ay wehelinayeen nolosha fanaanka weyn. Soo-booqdayaasha da'doodu ka yar tahay 18-ka bilaash waxay ka galaan madxafka. Halkaan ka daawo aflaam ku saabsan fannaanka oo martigaliya riwaayado iyo bandhigyo.
Beerta Madadaalada "Tusenfrid". Cinwaanka: Hoyungsletta, 1407 As (waxay qiyaastii 20km u jirtaa Oslo). Intii lagu gudajiray beertani waxay kasbatay sumcad baarkinka baashaalka xad dhaafka ah ee Scandinavia. Haddii aad leedahay neerfaha birta, waxaan kugula talineynaa inaad isku daydo «Xawaaraha Xawaaraha ah»: Gawaarida orodka oo leh awood dhan 6,000 faras wuxuu horumarin doonaa xawaare dhan 90 km / saacaddii 2 ilbidhiqsi oo keliya iyo isu soo baxa 7 jeer waxaad isku arki doontaa xaalad culeys la'aan. Waxa kale oo ku yaal baarkinka biyaha, meelaha soo jiidashada carruurta iyo maqaaxiyo badan.
Park "Gustav Vigeland." Cinwaanka: Nobels gate 32. Miyaad doorbideysaa inaad tixgeliso farshaxanimada hawada furan? Kadib doorashadan aad qumman tahay. Halkan, geedaha manicured iyo muuqaalka quruxda badan waxaad ka heli doontaa 212 farshaxan oo ka samaysan granite iyo naxaas.
Dhismaha Guryaha Magaalada. Cinwaanka: Fridtjof Nansens plass. Dhismo taariikhi ah oo dibedda iyo gudaha ah ayaa aad u xiiso badan. Ilaa 1990 waxaa halkan lagu qabtay Abaalmarinta Nobel. Gudaha dhismaha waxaad ka heli doontaa qurxin qurux badan oo qolal ah, sawirro qurux badan iyo qurxin jilicsan.
Noorway waa wadan yar - oo kaliya qiyaastii 5 milyan oo qof. Khasnada ugu weyn ee dabiiciga ah ee Norwey - saliida. Waxaa la helay 1969 illaa iyo markaasna waxaa loo dhoofiyey Yurub;
Cimilada Noorway waxay isku beddeleysaa xawaaraha hillaaca. Xitaa waxaa jira oraah ku habboon: “Ma jecli cimiladeena? Dhib ma ahan, sug 15 daqiiqo “;
«Brunost» - jiiska ariga buniga ah, mid ka mid ah waxyaabaha ugu macaan dalkan;
Tirada carruurta qoysaska halkan ku nool ayaa ah astaamaha ugu cadcad ee ladnaanta. Celceliska tirada carruurta ee qoyska - saddex;
Dharka gacmaha ee boqorka waxaa laga akhrisan karaa halkudhegga ah “All for Norway”;
"Aquavit" (Laatiinka loogu talagalay "Biyaha Nool") - cabitaanka khamriga ee qaranka ee 35 - 50% waa aalkolo baradho ah oo la farsameeyay, oo lagu shubay sanado badan dhir udgoon (cumin, koryander, fennel, anise, qorfe, fennel, St. John's wort) Laakiin kaliya ha iibsan aalkolo. Waxaa lagu iibiyaa oo keliya dukaamada khaaska ah «Vinmonopolet». Shabakadan alkomarketov waxaa iska leh gobolka oo kaliya waxay shaqeeyaan maalmaha shaqada.